Xirfadleyda Caafimaadka Haweenka waxay ku dhalaan dhallaanka Isbitaalka Riverside Methodist, Dublin Methodist Hospital, Isbitaalka Jaamacadda ee Gobolka Ohio iyo Isbitaalka St. Ann. Haddii aad leedahay doorbid, waxaan isku dayeynaa inta ugu fiican ee aan ku dejineyno. Xusuusnow inaad marka hore nala soo xiriirto ka hor intaadan aadin isbitaalka.
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku soo wareegto dhammaan isbitaalada ka hor intaadan go'aansan meesha aad geyso. Booqashooyinka waa la jadwalayn karaa iyadoo la wacayo oo la codsanayo in la ballansado fasal cisbitaalka dhalmada ama booqasho. Macluumaad dheeraad ah (iyo dalxiisyo dalxiis ah) ayaa laga heli karaa degel kaste boggeeda internetka.
Isbitaalka Riverside: 443-2584 ama 566-5000
Isbitaalka Dublin: 566-1111
Isbitaalka St. Ann: 898-6667 ama 234-5433
Si aad jadwal ugu samaysato booqasho, wac cisbitaalka laba bilood ka hor taariikhda dhalmadaada.
Mid kasta oo ka mid ah saddexda isbitaal wuxuu leeyahay qolal dhalmada. Ilaa iyo inta aan fileyno foosha iyo foosha aan dhib lahayn, waa lagugu soo dhaweynayaa inaad isticmaasho qolalkan.
Shirkadahaaga caymiska waxay u baahan karaan in isbitaal gaar ah loo isticmaalo kharashyadaada si loo daboolo. Tani badanaa run ayey ku tahay HMOs iyo PPOs.
Fadlan ka hubi shirkadda caymiskaaga bilowga uurkaaga si aad u ogaato waxa xulashooyinkaagu yihiin. Haddii aadan sameyn, macaashkaaga si weyn ayaa loo dhimi karaa ama adeegyada aan haba yaraatee la daboolin. Fadlan la socodsii bixiyaha heeganka ah waqtiga foosha wixii xaddidaad cisbitaal ah.
lama saadaalin karo. Ilmuhu way dhashaan saacadaha oo dhan habeen iyo maalin, iyadoon loo eegayn xilli. Tani waxay u baahan tahay inay jirto adeeg bixiye la heli karo 24 saacadood maalintii, 365 maalmood sanadkii.
Bixiyahaaga shaqsiyeed wuxuu jeclaan lahaa inuu ballanqaado inuu dhalayo ilmahaaga, laakiin, jadwalkaan adag awgeed, tan macquul maahan. Sidaa darteed, waxaan ku wareejineynaa jadwalka wicitaanka ee ka dhexeeya bixiyeyaasha anagoo ku tababaran.
Hal bixiye oo ka socda rugtayada ayaa soo waca markasta oo waxaa lagu heli karaa adiga oo waca lambarka xafiiskayaga oo ah 614 / 268-8800.
Dr. Alexandra Schueler Dr. Lauren Sagaria Dr. Carrie Soder Dr. Amy W. Rahl Dr. Ann Marie Wurst Dr. Joanna Buell Dr. Erika Boothman Dr. Kevin Hackett Goobta Columbus Goobta Dublin Goobta Westerville